Thatha i-advanteji ye-Apple's College Offers | Ndisuka kuMac
Ukuza kuthi ga ngoku uninzi lwakho sele lusazi ukuba iApple inecandelo elikhethekileyo lokubonelela abafundi baseyunivesithi. Ngaphakathi kwezi zibonelelo sifumanisa ukuba zikhona i-10% isaphulelo kwiimveliso ezininzi ze-hardware yenkampani kunye nezinye izaphulelo ezinomdla.
Ngale ndlela, kusenokwenzeka ukuba uninzi lwenu sele luvile ngale nto Apple inikeza abafundi beekholeji, kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba oku kusebenza nakwizalamane zabafundi, ootitshala okanye abasebenzi abanxulumeneyo.
Iyafumaneka kubafundi ababhalise okanye abamkelwe eyunivesithi, abazali abathengela abafundi baseyunivesithi kunye neenjingalwazi okanye abanye abasebenzi kwicandelo lezemfundo.. Ukuqalisa, khangela ukuba uyahlangabezana neemfuno. Ngeemveliso ezilungileyo ze-Apple, unokufezekisa yonke into obeka ingqondo yakho kuyo. Kwaye ukukunceda, iApple ibonelela ngamaxabiso akhethekileyo kwicandelo lezemfundo
1 Ukuba neakhawunti e-UNiDAYS yimfuneko ebalulekileyo
1.1 Izaphulelo ezisebenzayo ze-10% ekuthengeni unyaka wonke
2 Isaphulelo esele sisebenza iminyaka
3 Iinkonzo zikwawela phakathi kwezi zaphulelo
4 Uyithenga njani iMac okanye i-iPad ngesaphulelo somfundi kwiwebhu
5 Uyithenga njani iMac okanye i-iPad ngesaphulelo somfundi kwiwebhu
Ukuba neakhawunti e-UNiDAYS yimfuneko ebalulekileyo
Ngokucacileyo ukufikelela kwezi zaphulelo kufuna imfuneko ebalulekileyo, ube neakhawunti ye-UNIDAYS. Ukwenza oku kufuneka ufikelele kwiwebhusayithi ye-Apple apho kusithatha ngokuthe ngqo ekudalweni kwale akhawunti, sabelana nge ikhonkco lokubhalisela UNiDAYS.
Lakuba lenziwe eli nyathelo kufuneka sithathele ingqalelo eminye imiba efana naleyo inani lezixhobo onokufikelela kuzo lilinganiselweUkongeza, kufuneka wamkele umgaqo-nkqubo wabucala kwaye uvumele kuphela i-UNIDAYS, kwaye hayi i-Apple, ukugcina, ukulawula kunye nokusebenza kwedatha oyinikezelayo. Ukuba awufuni ukuba i-UNiDAYS ibe nedatha yakho, sebenzisa ezinye iindlela zokuqinisekisa.
Kwelinye icala, kubalulekile ukutsho ukuba sikwanazo izaphulelo kwisoftware kunye nobhaliso lwe-Apple. Phakathi kwabo kuyacaca ukuba iApple Music, iApple TV, iApple One kunye nezinye iinkonzo enikezelwa yi-Apple namhlanje.
Izaphulelo ezisebenzayo ze-10% ekuthengeni unyaka wonke
Abasebenzisi abaninzi bacinga ukuba ezi zinikezelo zinexesha lokuphelelwa kodwa hayi kwimeko yokuthenga eyunivesithi. Abasebenzisi banokuzonwabela ezi 10% izaphulelo kwimveliso nganye kunyaka wonke, ngaphandle kwemihla ethile. Oku kwenza kube nomdla kakhulu kubafundi ukuba bathenge imveliso ngenye yezi akhawunti kuba ngokubhaliswa nje sinokusonwabela isaphulelo kwimveliso, inkonzo njl.njl.
Ukuthenga iMacBook entsha, iMac entsha, okanye nayiphi na i-iPad okanye isincedisi Inkampani yeCupertino inokungabizi kakhulu ngenxa yobhaliso lwe-UNiDAYS. Oku kuyasebenza ngoku qhubeka nayo.
Isaphulelo esele sisebenza iminyaka
Uninzi lwakho, elona gqala, ngokuqinisekileyo uyakhumbula xa uxelele umthengisi ngokuthe ngqo okanye kwiwebhusayithi ye-Apple ubonise ukuba ufuna isaphulelo sabafundi ngaphandle kokungaphezulu. Oku kunokwenziwa kwiminyaka embalwa edlulileyo, akukho akhawunti ye-UNIDAYS okanye nantoni na efana nayo efunekayo ukuxhamla kwisaphulelo se-10% kwixabiso leemveliso ze-Apple.
Ngengqiqo abasebenzisi abaninzi abebesazi ngesi saphulelo sabafundi bathathe ithuba laso. Ngaphandle kokuba ngabafundi bacela isaphulelo kunye Ekugqibeleni u-Apple wayeka "ukuthembela kakhulu" kwaye wakhetha ukusebenzisa le ngqinisekiso nge-UNIDAYS ukuba inye kuphela into eyenzayo kanye kukukhangela ukuba ngokwenene sinayo i-akhawunti yomfundi kwiyunivesithi okanye esikolweni.
Iinkonzo zikwawela phakathi kwezi zaphulelo
Kubo bonke abo bafuna ukonwabela isaphulelo kubhaliso lweApple Music, Apple TV +, Apple Fitness +, Apple One kunye nezinye iinkonzo ezibonelelwa nguApple ngokudibeneyo okanye ngokwahlukeneyo, banokuzuza kwesi saphulelo sabafundi.
Umzekelo, ukufumana isaphulelo kubhaliso lwe-Apple Music, kufuneka silandele la manyathelo:
Vula usetyenziso loMculo okanye lwe-iTunes kwaye ucofe kuMamela okanye wenzela wena
Thepha okanye ucofe kunikezelo lwesilingo (enye ngomntu okanye usapho)
Khetha uMfundi kwaye ucofe okanye ucofe ku "Jonga iimfuno"
Uya kubhekiswa kwiwebhusayithi ye-UNiDAYS, apho kufuneka ulandele imiyalelo ekwisikrini ukuze uqinisekise ukubhaliswa kwakho. Xa i-UNiDAYS iqinisekisile ukuba ungumfundi, uya kuthunyelwa kusetyenziso loMculo okanye kwi-iTunes
Sayina ungene nge-ID ye-Apple kunye negama lokugqitha olisebenzisa ekuthengeni. Ukuba ngaba awunayo ID Apple, khetha "Yenza Apple ID entsha" kwaye ulandele la manyathelo. Ukuba awuqinisekanga ukuba une-ID ye-Apple, sinokukunceda ukuba ufumane
Qinisekisa ulwazi lwakho lokuhlawula kwaye wongeze indlela yokuhlawula esebenzayo
Cofa okanye ucofe Joyina
Le yinto eyenziwa ngokuthe ngqo kuzo zonke iinkonzo ze-Apple kwaye ukuthenga imveliso kuyafana. Inkqubo ilula kakhulu kwaye intuitive, awuyi kuba neengxaki ngayo, konke okufuneka ukwenze ukuya ngqo kwicandelo elithile labafundi ukuba bathenge.
Ukufikelela UNiDAYS kwaye uyonwabele ezi zaphulelo kwiimveliso ze-Apple.
Uyithenga njani iMac okanye i-iPad ngesaphulelo somfundi kwiwebhu
Izaphulelo ziyahluka ngokuxhomekeke kwimveliso kodwa kwiiMacs ziyi-10% kwixabiso layo. Kwi-iPad bahamba ukusuka kwi-6 ukuya kwi-8% kuxhomekeke kwimodeli ekhethiweyo kwaye kwizinto ezincedisayo kwenzeka ngakumbi okanye ngaphantsi okufanayo. Elona xabiso lisezantsi leMacBook kwivenkile yabafundi yi-1016 euros. Isixhobo somgangatho wokungena esongeza i-chip ye-M1 ye-Apple, i-8 CPU cores kunye ne-7 GPU cores. Kwimeko yomzekelo ophezulu (owona ucetyiswayo) ixabiso lihlala kwi-euro ye-1.260,15, kwaye le sele isele idibanisa i-8 GPU kunye ne-8-core CPU ngokunjalo.
Ukwenza ukuthenga usebenzisa UNiDAYS kufuneka ulandele la manyathelo.
Ngena ngqo kwi imfundo apple website kwaye ucofe ukhetho Jonga nge UNiDAYS
Yenza iakhawunti yethu entsha ukuba asisenayo usebenzisa idilesi ye-imeyile kunye negama lokugqitha
Nje ukuba iakhawunti yakho yenziwe, kufuneka uqinisekise ukuba ungumfundi ngokulandela la manyathelo
Isikrini siyavela apho unokukhangela ngokuthe ngqo eyunivesithi okanye ikholeji oza kubhalisa kuyo
Nje ukuba uyifumene, ungabhalisa kwaye ungene kwakhona kwiVenkile ye-Apple yemfundo ngokufumana isaphulelo
Kubo bonke abo banevenkile ye-Apple kufutshane nekhaya labo okanye banokusondela kwenye, kuyenzeka ukuba basebenzise isaphulelo se-UNiDAYS ngqo kubo. Ezi zaphulelo azihlukanga kwaphela ukuba uthenga kwiwebhu okanye kwivenkile ebonakalayo.
Nje ukuba ufikile evenkileni kufuneka ubonise Olunye uxwebhu olungqina ngokuthe ngqo ukuba ungumfundi, utitshala okanye umsebenzi weziko lemfundo. Kwivenkile baya kuqinisekisa idatha kwaye banikeze izaphulelo ezifanayo esizifumana kwicandelo leSitolo se-intanethi semfundo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Thatha ithuba lokubonelela ngeApple kubafundi beekholeji
Ngoku unokukhuphela iDropbox beta ehambelana neApple's M1